Ogaysiis Muhiim ah: Shacabka DDSI Dal Iyo Dibadba - Cakaara News
Ogaysiis Muhiim ah: Shacabka DDSI Dal Iyo Dibadba
Jigjiga (Cakaaranews) Isniin, 6da February 2017. Sida lawada ogsoonyahay, Waxaa deegaankeena kajira abaaro saameeyay qaar kamid ah gobolada deegaanka oo ay keentay isbadalka cimiladu islamarkaana sababtay roob yaraan iyadoo dawlada federalka ah, Dawlada deegaanka iyo hay’adaha caalamiga ahba ay wadaan dadaalo dheeri ah oo ay dadka iyo duunyadaba kaga samatabixinayaan abaaraha. Sidoo kalana dadka soomaalida ah ee ay deeqsinimadu dhaqanka utahay ayaa wada dadaalo ay dhankooda kaga qaybqaadanayaan xaaladan abaaraha.
Hadaba, maadaama ay jiraan dad isu xilqaamay inay si wadaninimo ah ugu gurmadaan dadkooda iyo kuwo magaca abaarta darteed gudaha iyo dibadaba lacago kaga ururinaya shacabka deegaanka taas oo aysan ogayn dawlada iyo shacabka ay u ururinayaanba halkaasna ay kacadahay inuu jiro musuq iyo danaysi gaar ah. Sidaas darteed, waxaa cidkasta oo lacag kuqaaday magaca abaaraha la ogaysiinayaa inay sida ugu dhakhsaha badan ulaxidhiidhaan gudiga abaaraha heer deegaan islamarkaana ay kuwareejiyaan hantigii ay ururiyeen maadaama oo aysan sharci ahayn nidaamka ay wax ku ururinayaan islamarkaana looga hortago shaqsiyaadka kafaaiidaysanaya deeqsinimada ama gacan-furaanshaha ay dhaqanka uleedahay soomaalidu oo ay kanaxayaan markii ay cidi lacag kuwaydiiso xaalada abaarta iyagoo aan kafiirsanina shacabku degdeg kubixinayaan.
FG: Cidkasta oo lacag ku ururisay magaca abaaraha waa inay mudo labo maalmood gudahood ah ay kuwareejiyaan gudiga abaaraha heer deegaan hadii kale waxaa laga qaadi talaabo sharciga waafaqsan.
Dhanka kale, cidkastoo muwaadin ah oo raba inuu kaqaybqaato xaalada abaaraha deegaanka waxaa la ogaysiinayaa in degmo kasta oo deegaanka ah loo furi doono Account number ay maamuli doonaan shacabka deegaanku iyagoo si cadcadaan ah loola xisaabtami doono.
FG: hadaba ciddii rabta inay si shaqsinimo ah gacan uga gaysato xaalada abaaraha ama ucaawiso shaqsiyaad gooni ah ama goob gaar ah waa in la ogaado xiliga, waxa uu kudeeqayo, cidda ama goobta uu ugu deeqayo si ay unoqoto mid sharciga waafaqsan.